चुनाब आएपछि यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने नेताहरुको लागि श्रेष्ठको गतिलो झापड - Purbeli News
चुनाब आएपछि यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने नेताहरुको लागि श्रेष्ठको गतिलो झापड
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २९, २०७४ समय: ८:२१:४१
पथरी । चुनाब आएपछि यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने नेताहरुको लागि उनको यो काम यतिबेला गतिलो झापड भएको छ । उर्लाबारी ९ का सुन्दर श्रेष्ठले गाउँमा समाजसेवाका माध्यमबाट गतिलो झापड हानेका छन् । जुन कुरा उनले सामाजिक काम गरेर सावित गरेका छन् । गाउँको स्तरोउन्नतीमा कसैको ध्यान त्यति नपुगेपछि मोरङ श्रेष्ठले आफ्नो नीजि खर्चमा समाजसेवा मार्फत गाउँ विकास गरिरहेका छन् । कहिले सडक बत्ति, खेलकुद , विद्यालयमा विविध सहयोग तथा बाटोघाटो निर्माणमा पनि उनको सहयोग उच्च छ । सहरमा बसेर पनि आफु जन्मे हुर्केको गाउँको विकास गर्दै आएका श्रेष्ठ हामीले नगरे कस्ले गर्ने अहिले नगरे कैले गर्ने भन्दै युवाहरुलाई उर्जा प्रदान गर्ने गरेका छन । सुन्दरलाई जान्ने बुझ्नेहरु भन्छन्, उहाँले गाउँको लागि महत्वपूर्ण सहयोग गरेका गर्नुभएको छ ।
उनले विद्यालयहरुमा सहयोग गरेका छन् भने गाउँमा सडकबत्ति जडान गरिदिएका छन् । आफ्नै लगानीमा बाटोघाटो निर्माण गरिदिएका छन । खेलकुल तथा कलासंस्कृति पनि उच्च सहयोग गरेका छन् । सकारात्मक सोच बोकेर सहयोगी हात फिजाएर आएको मानिसहरुलाई सुन्दरले अहिले सम्म खालि हात फर्काएका छैनन् । उर्लाबारी ९ को प्रभात निमाविमा उनले मञ्च निर्माण गरिदिएका छन्, घेराबारामा सहयोग गरेका छन् । यतिमात्र होईन,सोहि विद्यालयमा रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारेका छन् । यस्तै उर्लाबारी ९ कै राजघाट निमाबिमा विद्यालयको घेराबारा पछि गेट निर्माण गरिदिएका छन् ।
गाउँको पोलपोलमा सडकबत्ति जडान गरिदिएर गाउँ नै झलमल्ल पारेपछि स्थानीयले खुशी प्रकट गर्छन् । नत्र गाउँ अन्धकार थियो । सुन्दरको सहयोग यतिमै सिमित छैन, गाउँको कृतन मण्डली मठमन्दिर,खेलकुदमा पनि उनको सहयोग उच्च छ । सुन्दर भन्छन्,धन भन्दा पनि मन भएर सहयोग गरेको हुँ । उनले अब विद्यार्थीको लागि छात्रबृत्ति कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको सुनाए ।
हाल उनले आफ्नो गाउँमा एकल लगानीमा बाटो खोलिदिएपछि खेत भित्र भित्र बाटो बनेको छ । स्थानीय काजी लिम्बू भन्छन्,घर अगाडि नै बाटो बनेपछि बिरामी बोकेर लानुपर्ने अबस्था छैन्, गाडी आगनमै आईपुग्छ । बाटो खोलेपछि सम्भावना झनै बढेको लिम्बूले बताए ।
नगरको सवारी, विदाको दिनपनि अधिकृतको मनपरी !
एकल लगानिमा मन्दिर निर्माण, को हुन ति दानविर ?
अवैध काठ दाउरा निकासी गर्दै गरेकाे ट्याक्टर नियन्त्रणमा (तस्विरहरू सहित)
पथरीशनिश्चरेकाे बजेट ६० करोड २९ लाख २७ हजार
स्ववियू द्वारा क्याम्पस प्रमुखकाे कक्षमा ताला
जिल्ला स्तरीय तेक्वान्दोको उपाधी पथरीशनिश्चरेलाई
निगुरोले धानेको जिवन…
सेटिङमा निर्माण भएकाे पुल एकदीन परेको पानीले यस्ताे बनाएपछी